Vaovao - Ny tsy fitovizan'ny fandrahoana induction sy ny fahandro infrared
Ny fitsipiky ny fandrahoan-tsakafo infrared: aorian'ny fanamafisana ny vatan'ny lafaoro fanamainana (vatana fanamainana vy nikel-Chromium), mahomby be eo akaikin'ny tara-pahazavana. Amin'ny alàlan'ny asan'ny takelaka microcrystalline dia misy taratra infrared tena avo lenta. Ny tsipika afo dia mahitsy, ary ny hafanan'ny hafanana dia esorina mivantana eo am-pototry ny vilany, mba hahatratrarana ny vokatra azo. Amin'ny fiteny mahazatra, napetraka eo ambanin'ny vilany ny tariby fanoherana. Ny tariby fanoherana dia atsofoka ao anaty tariby ary mivadika mena, miteraka hafanana. Ny hafanana dia omena ny vilany hahatratra ny vokatry ny hafanana.
Fitsipika miasa momba ny fandrahoana induction: ampiasaina ankehitriny ny alternating current mba hiteraka sahan'andriamby mifandimby izay miovaova hatrany ny lalana amin'ny coil. Eddy current dia hiseho ao anaty ny conducteur ao amin'ny sahan'andriamby mifandimby. Ny vokan'ny hafanana Joule amin'ny ranon-tsolika dia hampahafana ny mpitarika, mba hahatsapana ny fanafanana. Ny teboka malaza, dia ny fiatraikany mivantana amin'ny fampidirana electromagnetika amin'ny vilany, ny vilany ihany no manafana, hahatratrarana ny anjara asan'ny fanafanana sakafo.
Fahasamihafana voalohany: Azo ampiharina amin'ny vilany.
Ny mpahandro infrared dia mamindra ny hafanana mivantana amin'ny vilany, noho izany ny vilany dia azo atao amin'ny fitaovana isan-karazany, amin'ny ankapobeny tsy misy vilany, misy poti azo ampiasaina.
Induction cooker dia vilany ao amin'ny fampidirana electromagnetic eo ambanin'ny fanamainana, raha ny vilany miaraka amin'ny fitaovana dia tsy manaiky ny andraikitry ny sahan'andriamby, avy eo ny fanamainana dia tsy misy resaka intsony, noho izany ny famonoana dia manana famerana, tsy afaka mampiasa vilany andriamby fotsiny, toy ny vy vilany.
Fahasamihafana 2: tahan'ny fanafanana.
Ny mpahandro infrared dia miadana miadana satria manafana ny singa manafana azy, avy eo afindra ao anaty vilany.
Indraindray ny fandrahoana induction dia nanomboka fampidirana elektromagnetika, hampitombo hafanana ny vilany andriamby, ka haingana kokoa noho ny lafaoro seramika elektrika ny hafainganana.
Ka amin'ny tena fampiasana ny fizotrany, ny vilany fandrahoan-tsakafo dia mirona kokoa hisafidy ny fandrahoana fampidirana, satria haingana kokoa ny fanafanana.
Fahasamihafana 3: vokatry ny hafanana tsy tapaka.
Ny lafaoro seramika mandeha amin'ny herinaratra dia manana fifehezana mari-pana marina, izay hampihena ny herinaratra rehefa mahatratra mari-pana izy io, noho izany dia tsara kokoa ny fiakaran'ny mari-pana.
Ny lafaoro fanindronana dia fanafanana miserana, mafana loatra, akaiky, manohy hafanana, noho izany dia tsy tsara ny vokatry ny hafanana tsy tapaka.
Noho izany, ny ronono mafana mifidy ny fatana tanimanga dia tsara kokoa.